Spirit Airlines dia manomboka serivisy ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Bradley any Hartford
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Spirit Airlines dia manomboka serivisy ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Bradley any Hartford
Tafita velona tamin'ny ririnina New England ianao ary tonga izao ny fotoana handaminana izany fialan-tsasatra fahavaratra mendrika izany. Spirit Airlines dia mitondra ny serivisy any Connecticut sy Western Massachusetts ara-potoana, miaraka amin'ny sidina vaovao tsy an-kiato avy any amin'ny Hartford's Bradley International Airport (BDL) mankany amin'ny Myrtle Beach International Airport (MYR), Orlando International Airport (MCO) ary Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL).
"Faly izahay manome izany serivisy tsy an-kijanona izany amin'ny toerana roa malaza indrindra amin'ny firenena," hoy i Mark Kopczak, filoha lefitry ny Network Planning for Spirit Airlines. "Ireo sidina vaovao ireo, miaraka amina serivisy vaovao mankany Fort Lauderdale manomboka amin'ny volana Jona, dia manome safidy tsy dia lafo indrindra ho an'i Hartford amin'ny dia amin'ny fahavaratra."
"Spirit Airlines dia fanampiny matanjaka amin'ny fisondrotan'ny sidina mivantana an'i Bradley", hoy ny filohan'ny filan-kevitry ny CAA, Charles R. Gray. “Iraka mitohy ataon'ny manampahefana ao amin'ny seranam-piaramanidina Connecticut dia ny hitiavan'ireo mpandeha an'i Bradley ny dia amin'ny alàlan'ny seranam-piara-manidina sy ny sisa. Ny fomba iray anaovana izany dia amin'ny fanohizana manatsara ireo safidin'ny sidina an'i Bradley, ka izany no antony mahafaly anay indrindra mandray an-tanana ny Fanahy ho an'ny fianakavian'i Bradley. ”
"Ny lakilen'ny fampandrosoana ny lalam-pirenena mahomby dia ny toeran'ireo mpanjifa tsy mivadika," hoy ny talen'ny Executive CAA, Kevin A. Dillon, AAE. "Ny serivisy Myrtle Beach dia nangatahin'ireo mpandeha matetika ary ny fahita matetika eo anelanelan'ny Bradley, Orlando ary Fort Lauderdale dia hanome safidy bebe kokoa an'ireo mpandeha. Manantena izahay fa ireo fanampiana ny rafitry ny zotra ireo dia hanentana hatrany ireo mpandeha hody any Bradley ary hisafidy ny seranam-piaramanidina eo an-toerana noho ny seranam-piaramanidina hafa. ”